Xildhibaan ku hanjabay iney mooshin ka keeni doonaan Prof. Jawaari * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 Last updated Nov 15, 2014
Mareeg.com: Xildhibaan C/raxmaan Xoosh Jibriil oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee mooshinka ka keenay Xukuumada uu hogaamiyo Ra’iisul Wasaare C/wali Sheekh Axmed ayaa sheegay iney ku haboontahay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari inuu tilaabo ka qaado xildhibaanada maalintii labaad kulanka carqaladeeyey ama uu kursiga ka dego.
Xildhibaan Xoosh ayaa dhanka kale ku hanjabay iney mooshin ka keeni doonaan gudoomiyaha Baarlamaanka, Prof. Jawaari haddii sida uu yiri ay ku cadaato inuu raalli ka yahay qolada fowdada ku haya baarlamaanka.
Hadalka xildhibaan C/raxmaan Xoosh Jabriil ayaa yimid kadib markii maanta xildhibaanada taageersan R/wasaare Cabdiweli ay markii labaad ku guuleysteen iney fashiliyaan kulanka baarlamaanka Soomaaliya oo laga qeybin rabay mooshin kalsoonida loogala noqonayo xukuumadda R/wasaaraha.
C/raxmaan Xoosh Jabriil ayaa ku doodaya in Prof. Jawaari adeegsan waayey awoodda uu siinayo Xeer Hoosaadka Baarlamaanka ee tilaabada looga qaadayo xildhibaankii carqaladeeya shaqada baarlamaanka.
“Gudoomiyaha Baarlamaanka howshiisii aheyd inuu maareeyo shirka baarlamaanka wuu gabay, haduusan shirka maareyn karin inuu xilka isaga fariisto oo is casilo waaye, anagaa soo dooraneyno gudoomiye cusub sida ugu dhaqsiyaha badan” ayuu yiri Xildhibaan C/raxmaan Xoosh oo la hadlay BBC.
Xildhibaanka ayaa mudanayaasha diidan mooshinka ku tilmaamay kuwa kontomeeyo ah, wuxuuna yiri “Baarlamaanku uma afduubnaanayo xildhibaanno afartameeyo ah, tanina waa nooc cusub oo isbaaro ahm haddii guddoomiyuhu uu raalli ka yahayna mooshin ayaan ka keenaynaa,” ayuu Xoosh ku goodiyay.
Markii maanta shirkii Baarlamaanka ay buuq ku joojiyeen xildhibaanada taageersan R/wasaare Cabdiweli ayaa waxaa carooday xildhibaano badan oo mooshinka taageersanaa ama weday, waxeyna gudoomiyah ku eedeynayaan inuusa tilaabo ka qaadin xildhibaanada ku buuqay kulanka ee sababta u noqday inuu fahsilmo maalintii labaad.